यो बेलामा कात्रोमा गोजी सिलाउने हरुलाई पापले भतभती पोल्ने छ , , – Ranga Darpan
यो बेलामा कात्रोमा गोजी सिलाउने हरुलाई पापले भतभती पोल्ने छ , ,
जन स्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे समिर ,
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Apr 16, 2020
वैशाख ४ ,काठमान्डौ – अहिले कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने भयो ,अब सबैको लागि पैसा अब मुल्यां भयो ,सेयर बजार डुब्यो जस्ता यो अवस्थामा कुरा नगर्न जन स्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे समिरले बताएका छन् ।
यस्ता कुरा भुकम्पको बेला नाकाबन्दीको बेला पनि हुनेगरेको र पछि विस्तारै सहज बन्दै गएको सबैलाई अवगत रहेको समिरले जानकारी गरे ।
चिन्ता, तनाब, असुरक्षा अनुभूति आदिले रोगसँग लड्ने शारीरिक, मानसिक तथा इम्युनिटी प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने भएको हुँदा यो बेलामा आशाका किरण वितरन गर्न पनि उनले सबैमा आग्रह गरे ।
नेपाल औधोगिक देश नभएको र हामीले साचेजस्तो अर्थतन्त्र डुब्ने चिन्ता नगर्न आग्रह अगर्दै यो संकट पार गरेपछि बरु दैनिक १६ घण्टासम्म काम गरेर खान सकिने उनले बताए ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएको र पुरै गाउँ बाँझो रहेको हुनाले खेतीपाती गरेर, अर्गानिक खाना खाएर तथा गाउँ आवाद गरेर झन् आत्मनिर्भर बन्नसकिने पनि समिरले बताए ।
लाँखौको रोजगार गुम्ने चिन्ता लिन हैन खेतीपाती, बाख्रापालन, कुखुरापालन, गाईभैंसी पालन आदि गरेर हाम्रा फार्ममा अरुलाई रोजगार दिने हैसियत कसरि बनाउने भन्नेमा सोच्न पनि उनले आग्रह गरे ।
भारतबाट समान ,ईन्धन औषधि आयात हुन छोड्यो भनेर चिन्ता नगर्न र नाकाबन्दीमा यो घटना घटिसकेको सबैले अवगत भईसकेको डा. पाण्डेको भनाई छ । यस्ता समान भारतले पनि चीनबाट ल्याउने भएको हुनाले हामीले पनि सिधै चीनबाट ल्याउन सकिने उनले बताए ।
कोरोनाले विकसित देशमा लाखौको मृतु भयो उनीहरुले नियन्त्रण गर्नसकेनन भने हाम्रो के हालत होला भनेर मनन गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
मान्छे मर्नु तेती सजिलो छैन ,संसारमा कोरोनाले मान्छे मर्दा नेपालमा केही भएन भनेर ढुक्क नहुन र यसको प्रतिरोध गर्न लकडाउनको पालना गरेर होम क्वारेईनटाईन बस्न पनि समिरले बताए ।
सरकारले केहि गर्दैन भ्रस्ट्राचार मात्र गर्छ भनेर निरासाको व्यापार नगर्न उनले आग्रह गरे । लकडाउन नगरेको भए नेपालको स्थिति अर्कै भईसक्ने थियो ,नेपालमा पोजेटिभ देखिएका अहिले सम्म एक जना बिरामी पनि आईसीयुमा भेन्टिलेटरमा ,नबसेको उनले बताए ।
देशभर क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र, अस्पतालमा बेडको क्षमता, PPE जस्ता अत्याबश्यक कुरामा प्रगति भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेको र प्रहरी प्रसाशन दिन रात खटिरहेको पनि उनले बताए ।
गाउँगाउँमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन्, स्वास्थ्यकर्मीले हप्तामा सातै दिन काम गरिरहेका छन् ।
यस्तो बेलामा कात्रोमा खल्ती सिलाउनेलाई अख्तियार, सिआइबि, चुनाब आदिले तह लगाउने छ । तेस्तालाई पापले भतभती पोल्नेछ । नराम्रो गर्नेको कहिल्यै राम्रो नभएको पनि उनले बताए ।
सहरमा खान नपाएर तथा उपचार नपाएर धेरैजना मर्ने भए भएर निरुत्साहित कुरा नगर्न र कोहि भोको र बिरामी भयो भने प्रहरी कार्यालय वा वडा कार्यालयमा जानसकिने समिरले बताए जँहा भोक र ज्वरोले मरिने छैन ।
भारतमा फैलीएको कोरोनाले गर्दा भारतीयहरु नेपाल आएर बर्बाद गर्छन जस्ता कुरा नगर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्म सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताको गस्ती राकेह्को छ ।
आवस्यक परे सरकारले बोर्डर शिल गर्ने र कर्फ्यु लगाउन सक्ने पनि समिरले बताए ।
तेसैले फेरी पनि भन्छु आज देखि
यस्ता कुरा नगरौ,
,जन स्वास्थ्य विज्ञ डा.रविन्द्र पाण्डे समिर ,
लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने तयारिमा जर्मन ,
सुर्खेत गुर्भाकोट ८ मा जनप्रतिनिधि शुशिला कार्कीले राहत नदिएर बृद्ध महिलालाई निर्घात कुटपिट मार्ने धम्कि ,